मान्छे मा*र्न खोज्ने डोजर चालकलाई कानुनि कठघरमा ल्याउन माग-ज्वाला सङ्ग्रौला
बैतडीको एक नगरपालिकामा एक डोजर चालकले एउटी महिलालाई जानीजानी ज्यान मा*र्ने हेतुले अमानवीय ढङ्गले डोजरले हिर्काएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। यो भिडियो हेर्दा मानबमा मानवीय स्वभाव नै हराएको जस्तै देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल मा भिडियो भाइरल भए पछि जताततै आलोचना भएको छ। अमानवीय व्यवहार देखाउने दानबलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै सबैले माग गरेका छन।
अमानवीय काम गर्ने डोजर चालक लाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै सामाजिक अभियान्ताहरू पनि लागिपरेका छन् ।जापानमा रहेकी नेपाली मुलकी सामाजिक अभियान्ता ज्वाला सङ्ग्रौलाले पनि यस्ता अमानवीय काम गर्ने पशुको दिमाग भिडाइएका दानबहरूलाई कदापी उन्मुक्ति दिनुहुन्न ।कानुन को दायरामा ल्याउनु पर्ने माग राखेकी छिन्।
सामाजिक अभियान्ता ज्वाला सङ्ग्रौलाको फेसबुक वालमा गरिएको पोष्ट जस्ताकोत्यस्तै हेर्नुहोस् ।
बैतडीको एक नगरपालिकामा ज्यानमारा डोजरले एउटी महिलालाई जानीजानी जमिनमा ढालेको भिडियोले स्तब्ध बनायो। यो डोजर चलाउने ब्यक्तिको खोजी गरि यस्लाई तुरन्त कानुनी कठघरमा ल्याउनु पर्यो । यस्ता अमानवीय काम गर्ने पशुको दिमाग भिडाईएका दानबहरुलाई कदापी उन्मुक्ति दिनु हुन्न । यो भिडियो भाईरल गरौँ त ! यो डोजर चलाउनेलाई बैतडीको जुनसुकै गल्लीबाट भएपनि थुतेर निकाल्न सबै लागि परौं! बैतडिबाट मेरो फेशबुकमा कोहि मित्र हुनुहुन्छ?? मसँग जोडिनु त प्लिज ..!!
ज्वाला सङ्ग्रौलाको फेसबुक पोष्टको सहयोगमा ।
सिधा कुरामा पनि